Opinion – JIS.DIGITAL
ဘုံရန်သူကို အရင်တိုက် . . . ကျန်တာ နောက်မှရှင်း . . .
HK July 8, 2021
” ဘုံရည်မှန်းချက်နဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက်အရင်ယူ၊ ရန်သူကို အတူတိုက်ပြီး ပြည်ထောင်စု စုပေါင်းတည်ထောင် (တပြိုင်နက် လုပ်ရန်) “ ငြိမ်းငြိမ်းပြည့် – ရေးသည်။ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၂၁။ လူတိုင်းသိပြီး...